UMsomi ubheke kuqokwe owakuleli ekucijeni elesizwe
UBONGIWE Msomi ongene emlandweni nozakwabo beqeda endaweni yesine kweyomhlaba ebiseLiverpoolIsithombe: STEVE HAAG
SMANGA ZUMA | August 19, 2019
UKAPUTENI weqembu lesizwe le-netball iSpar Proteas, uBongiwe Msomi akangabazi ukuthi umqeqeshi omusha ozoqokwa uzokwazi ukuqhakazisa leli qembu elizophekelwa indebe yomhlaba ezodlalelwa eKapa ngo-2023.
UBongiwe uveze ukuthi baningi abaqeqeshi bakuleli abacijwe umqeqeshi wabo osethatha umhlalaphansi uNorma Plummer.
Uthe babheke ngabomvu ukuthi ubani umqeqeshi ozoqokwa ukuthi angene esikhundleni sikaPlummer.
Uveze ukuthi uPlummer wamemezela ukuthi usethatha umhlalaphansi, inkontileka yakhe ibivele izophela emuva kweNdebe yoMhlaba ebiseLiverpool, e-England.
Uthe noma ngabe iNetball SA ibifisa aqhubeke bekungeke kwenzeke ngoba washo ukuthi emuva kweNdebe yoMhlaba usethi khumu.
“Engqungqutheleni ebikhona baveze ukuthi bazomgcina njengomqeqeshi ozokweluleka ozoqokwa. Angazi ukuthi ngibheke bani njengomqeqeshi omusha. UNorma ubeba nabaqeqeshi abacijayo njengoba besihambe noDorette. Uma siyodlala kwamanye amazwe ubethatha abaqeqeshi abahlukene. Kuke kwaba khona uDumisani Chauke ebhentshini no-Elsje Jordaan,” kusho uBongiwe.
Uthe bakhona abaqeqeshi okungase kube yibo kodwa baningi, akakwazi ukuqagela.
Uqhube wathi ngokwakhe umqeqeshi okhethiwe kumele ahlonishwe noma kungathiwa ubani.
“Abadlali kumele baqhubeke benze njengoba bebenza kuNorma. Sibonisile singabadlali ukuthi siyazimisela, abadlali abaningi badlala phesheya. Okuzobaluleka ukuthi umqeqeshi omusha ahlonishwe ukuze umsebenzi uqhubeke. Ngibheke umqeqeshi wakuleli,” kusho uBongiwe.
Echaza ngekusasa lakhe nokudlalela amaqembu aphesheya uthe ngesikhathi esuka kwiWasps okuyiqembu lase-England abelidlalela babenesifiso sokuthi aphinde abuyele khona.
“Uma ngibuyela phesheya ngizobuyela khona. Angifuni manje ngilokhu ngintanta. Kuzoqala manje ngo-Agasti ukuthi abadlali banikezwe izinkontileka, okwamanje akukho okusaqinisekisiwe. Uma kwenzeka kuzoba sekutheni ngime kuphi nezinhlelo zami ezizongithuthukisa ngaphandle kokudlala i-netball. Kumele ngikhumbule nokuthi iminyaka iyahamba nokuthi akumele ngingabi nenye into ezongiphilisa uma kwenzeka ngilimala, ngingasakwazi ukudlala,” kusho uBongiwe.
Unina uBusisiwe Msomi uthe wayengazi ukuthi indodakazi yakhe ingagcina isidume umhlaba wonke ngenxa ye-netball.
Owayenguthisha wakhe uSthembiso Mncwabe eLuthayi High eHammarsdale ayefunda kuso uthe wayengazi ukuthi ngesikhathi emfaka kulo mdlalo uyogcina esedlalela iqembu lesizwe.
Uthe impumelelo kaBongiwe yiyo eyenza ukuthi aqhubeke nokuqeqesha lo mdlalo yize aqala eminyakeni ewu-20 edlule. Ngo-Okthoba amaProteas kulindeleke adlale ne-England eKapa.